Fancy Acholonu ndiani? Alexx Ekubo anonzi akaparadzana nemusikana mwedzi mitatu vasati varoora - Pop-Tsika
Fancy Acholonu ndiani? Alexx Ekubo anonzi akaparadzana nemusikana mwedzi mitatu vasati varoora
Nhau dzichangoburwa dzinoti mutambi weNigeria Alexx Ekubo uye mukomana Fancy Acholonu vakaparadzana vasati varoora. Mishumo iyi inotaura zvakare kuti Acholonu akamisa chibvumirano uye akadzima yavo yakabatana Instagram peji, FalexxForever.
Fancy akasiya Alexx Ekubo, asi achiri kumutevera. Mutambi uyu ane akati wandei mafoto uye mavhidhiyo kubva kune yavo yekuita uye yekudyidzana mhemberero pane yake Instagram peji. Nekudaro, Acholonu abvisa mifananidzo yese yaanaAlexx paari Instagram peji.
Alexx Ekubo nemukomana Fancy Acholonu vanonzi vakamisa kuroorana kwavo mwedzi mitatu kumuchato wavo - https://t.co/Q8AsrFs13z pic.twitter.com/emTzBETqwW
chii chekutarisira kudanana nababa vasina murume
- Wave Nigeria (@ wavenigeria247) Nyamavhuvhu 25, 2021
Vaviri ava vakapinda muLos Angeles uye vakasunga pfumo musi waNovember 20, zvichiteverwa nemuchato wavo chena muLagos munaNovember 27. Vafans vakatanga kuita zvemasocial media nhau dzichangobuda, uye vazhinji vacho vaitenda kuti nhau dzinogona kusadaro. iva chokwadi.
Zvese nezvemurume waAlexx Ekubo
Fancy Acholonu neshamwari dzake (Mufananidzo ne Instagram / fancyacholonu)
Fancy Acholonu ndiye mukomana waAlexx Ekubo. Iye mutambi wenhau, modhi, uye mushamarari wezvemagariro uye anonyanya kuzivikanwa nebasa rake mumafirimu. Ane nhamba yakakura yevateveri pane yake yemagariro media account.
dombo rinotonhora steve austin zita rekutanga
Acholonu akazozivikanwa mushure mekunge mavhidhiyo ake apinda muhutachiona pasocial media. Aipota achiisa maitiro ekurovedza muviri pa Instagram. Akazvarwa muLagos, akazozivikanwa kumeso mushure mekuonekwa mumamuvhi senge Kumhanyira Kurarama, Kurarama Kumhanya, uye Lethal Muenzaniso . Vanhu vakasvika pakuziva zvakawanda nezvake zvichitevera kusangana kwake neNigerian mutambi Alexx Ekubo.
Mushure mekupedza fundo yake muLagos, akatanga modelling uye kuongororwa kwemamuvhi nemitambo yeTV aine makore 15. Pamwe chete neizvozvo, ruzivo nezve nhengo dzemhuri yake rwunoramba rwusingazivikanwe.
Fancy Acholonu anoshandisa modelling uye kuita chikoro chinonzi The Fancy Kids uye bhizinesi rezvishongo rinonzi Zodiacaa. Iye anotova akasimbiswa chiitiko kuronga uye anoronga kuve yake yekambani yechiitiko mune ramangwana. Kubatana kwake naAlexx Ekubo kwakabata pfungwa dzevakawanda, asi nhau dzinotaura kuti vaviri ava vapatsanuka.
ndiani anovengwa kpop chidhori
Verenga zvakare: NCT's Lucas inotumira ruregerero rwakanyorwa nemaitiro ekare maitiro; SM inoburitsa chirevo uye inomisa zviitiko zvake
mibvunzo inomutsa mibvunzo nezve nyika
chii chakaitika kuna cody rhodes
kupedza sei hukama hwakareba hunyoro
sei ndakabhoikana pane zvese
ndinoramba ndichirambana nemukomana wangu